Izindaba - Izinto zokusetshenziswa zamaphaneli elanga ziwile
Izinto zokusetshenziswa zama-solar panel zawa
Ngemuva kwamasonto amathathu alandelanayo okuzinza, intengo yezinto ze-silicon ibonise ukwehla okukhulu kakhulu ngonyaka, intengo yomjovo we-crystal compound eyodwa kanye ne-crystal dense material yehla ngaphezu kwe-3% ngenyanga ngenyanga, futhi isidingo esifakiwe esingezansi kulindeleke ukuthi sikhuphuke. !
Ngemva kokwehliswa kwentengo ye-silicon wafer kanye ne-silicon wafer, inani lentengo lehle laya ngaphansi kwamayuan angu-2 ngewatt eyodwa. Ngokusho kwezimakethe eziningi kubonisa ukuthi intengo yamanje ye-watt eyodwa icishe ibe ngu-1.9 yuan, futhi ngoDisemba 8, kukhandidethi eliwinile. yephrojekthi yokuthengwa kwemojula ye-photovoltaic ngo-2021, intengo ye-1.84 yuan / W isivele.
NgoDisemba 1, eNgqungqutheleni yesi-6 ye-Photovoltaic Innovation 2021 ehlelwe yi-Photovoltaic Industry Network, u-Zhang Xiaobin, iphini likamongameli we-Shandong Solar Energy Industry Association, uthe ngokukhululwa komthamo wokukhiqiza i-silicon, izintengo zezingxenye zizobuyela emuva kancane kancane, kanye nokushoda. inverter izoncishiswa.Ubikezele ukuthi isamba esifakiwe sizokwenyuka kakhulu ngo-2022! Ngokuqaliswa kwezinguquko zikagesi, amaphrojekthi ezimbonini nawezohwebo aphenduke izindawo ezishisayo.
Ngomhla ziyi-11 kuMfumfu, Ikhomishana Kazwelonke Yezokuthuthukiswa Nezinguquko yakhipha Isaziso Sokujulisa Kakhudlwana Inguquko Egxile Emakethe Yokuphehla Ugesi ngamalahle, ikhansela intengo yokuthengisa yamakhathalogi ezimboni nezohwebo, ezoguquguquka nenani le-grid lamandla wamalahle. .Abasebenzisi bezimboni nabezentengiselwano bangakhetha ukungena emakethe kagesi futhi bathenge ugesi ngokuqondile ezinkampanini eziphehla ugesi noma ezinkampanini ezidayisa amandla.Muva nje, i-State Grid kanye nezifundazwe ezingaphezu kuka-20 (izifunda nomasipala ezizimele) ngaphansi kwe-China Southern Power Grid bamemezele ithebula lentengo kagesi. kubasebenzisi bakagesi ezimbonini nabezentengiselwano ngoDisemba 2021, futhi cishe yonke indawo entantayo yamanani kagesi ngesikhathi sokukhuphuka kanye namahora aphakeme kakhulu yanyuswa.
Ngokukhuphuka kwamanani kagesi wezimboni nezentengiselwano, isivuno samaphrojekthi we-photovoltaic asatshalaliswa saqala ukukhula ngokwandayo.Kuyaphawuleka ukuthi phakathi nesikhathi soHlelo Lweminyaka Eyi-14 Lweminyaka Emihlanu, ngokusekelwa kokukhuthazwa nokuguqulwa kwamanani kagesi wesifunda sonke, inkathi yegolide ye-photovoltaic esabalalisiwe isifikile!
Emabhizinisini asezimbonini ezisetshenziswa kakhulu amandla, ngokwemithetho yamanje, izinga lentengo kagesi elithengwe amabhizinisi egridi kagesi kufanele libe liphindwe izikhathi ezingu-1.5 kunentengo yokuthenga ugesi yabanye abasebenzisi.Okwamanje, i-China ilawula ngokuqinile ukwanda okungaboni kokusetshenziswa okuphezulu kwamandla. amabhizinisi, kanye nezindleko zikagesi zamabhizinisi asebenzisa amandla aphezulu ziyenyuka.Kuyonga ngandlela-thile ukukhetha ukutshala nokufaka i-photovoltaic esabalalisiwe ukuze isetshenziswe ngokuzenzekelayo.
Esifundeni esisempumalanga yeChina, njengeSifundazwe saseShandong, iSifundazwe saseHebei, iDolobha laseBeijing, iSifundazwe saseJiangsu nezinye izindawo, amabhizinisi amaningi uma kuqhathaniswa amatasatasa ekukhiqizeni, amabhizinisi anamafekthri amaningi, ingcindezi enkulu yokunciphisa ukungcola, kanye nokuzimisela ukutshala imali embonini. ukufakwa kwe-photovoltaic esabalalisiwe kuzoba namandla.
Ngokombono wezohwebo, amabhizinisi amakhulu namafekthri, uxhaxha lwezitolo ezinkulu, kanye namabhizinisi azimele konke kunezinzuzo ezinsizeni zophahla.Iningi lalezi zinkampani lingabathengi abakhulu, futhi ukusebenzisa amandla ophahleni ngendlela efanele kungaba yimpahla enkulu.Ngaphezu kwalokho, amalungelo endawo yezindlu yalolu hlobo lwamabhizinisi angafinyelela ilungelo lokusebenzisa iminyaka engaphezu kwengu-20, efaneleka kakhulu ukuthuthukiswa kwama-megawatt noma iziteshi ezinkulu zamandla ophahleni, ezingaxazululi kuphela inkinga kagesi kumabhizinisi, kodwa futhi yenza umnikelo omkhulu ezinzuzweni zenhlalo, ezomnotho kanye nezemvelo.
Uphahla lwezimboni nezentengiselwano lufaneleka kakhulu ukufakwa kweziteshi zamandla e-photovoltaic, ikakhulukazi eziboniswa kulawa maphuzu alandelayo:
1. Indawo yophahla lwezimboni kanye nezohwebo inkulu, okuwumthombo omkhulu ongasebenzi wenkampani!Ingathuthukiswa futhi isetshenziselwe ukunikeza amabhizinisi umgudu owengeziwe wokukhulisa imali engenayo, futhi imali engenayo ye-photovoltaic power station iphezulu.
2. Ukusetshenziswa kukagesi ezimbonini nezohwebo kukhulu, futhi izindleko zikagesi ziyabiza.Ngemva kokufakwa kweziteshi zikagesi, abasebenzisi bezimboni nabezentengiselwano bangasebenzisa ukukhiqizwa kwamandla eziteshi zikagesi ze-photovoltaic ukunciphisa izindleko zikagesi zamabhizinisi.Ngaphezu kwalokho, bangakwazi futhi ukusebenzisa indlela yokusebenzisa ugesi osele ngokuzenzakalelayo ukuze badayisele izwe ugesi osele futhi bathole inzuzo.
3. Umbuso ukhuthaza ngamandla ukongiwa kwamandla kanye nokunciphisa ukukhishwa kwegesi, futhi amabhizinisi amaningi abhekene nokucindezela kokugcinwa kwamandla kanye nemikhiqizo yokuvikela imvelo.I-Photovoltaic power generation ingamandla ahlanzekile.Ukufakwa kweziteshi zamandla e-photovoltaic kunganciphisa ukukhishwa kwekhabhoni, kulethe idumela lamabhizinisi aluhlaza emabhizinisini, kuthuthukise ithonya lamabhizinisi futhi kuthuthukise isithombe sabo senkampani, ikhadi legama lomkhiqizo ophezulu, kungani kungenjalo?
4. Amanye amadolobha athuthukile kwezomnotho anogesi omningi ogcwele ugesi, okuholela ekushodeni kukagesi! Ukufakwa kweziteshi zikagesi ezibizwa nge-photovoltaic kungadambisa ukungezwani kukagesi futhi kunciphise nomfutho kagesi.
5. Ukukhanyisa okuhle, uphahla lwezimboni nezohwebo ngokuvamile lukude nezindawo zokuhlala, ukukhanya okuzungezile akuvinjiwe, futhi ukusebenza kahle kokukhiqizwa kwamandla kuphezulu!
6. Uphahla luba namandla futhi lube nemfashini.Isistimu yokukhiqiza amandla e-photovoltaic esatshalaliswayo eyakhelwe ophahleni lwezimboni zezimboni nezentengiselwano ngeke nje ibhubhise isakhiwo sophahla, kodwa futhi inganciphisa ngokuphumelelayo ukukhanya kwelanga okuqondile ophahleni, ukuguguleka kwamanzi emvula, nokwandisa impilo yesevisi yophahla.
Isikhathi sokuthumela: Dec-10-2021
Uchwepheshe ozinikele ekucwaningeni nasekuthuthukiseni, ekukhiqizeni nasekuthengiseni amaphaneli elanga.Inkampani ikakhulukazi ikhiqiza amaphaneli elanga e-polycrystal ne-monocrystal anemingcele ehlukene.
Ikheli lefekthri:West of Dabeisu village , n HequTown, Ningjin County , Xingtai City, Hebei Province, China
© Copyright - 2010-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe. , , , , , , , ,